‘मलमासले हनिमुन मनाउन पाइएन’  Hamrosandesh.com
म लमजुङ जिल्लामा कार्यक्रमका लागि गएको थिएँ । त्यहाँ निकै दिन बसियो । स्कुल पढ्दै गरेकी एक युवती मन प¥यो तर प्रेम नै हुन्छ भन्ने चैँ थिएन ।
बल्छीजी, समाज आधुनिक देखिए पनि व्यवहारमा त अझै कठिन छ । तपाई नेवारी समुदायको, करुणाजी क्षत्री समुदायको । सहजै विवाह भयो कि पापड बेल्नुप¥यो ?
अब हिरो बन्न अग्लो हुने राम्रो कद परेको हुनुपर्छ भन्ने छैन । स्टोरी राम्रो हुनुप¥यो । अभिनय दमदार हुनुप¥यो । फिल्म चल्न गाह्रो हुँदैन । काठमाडौँका मान्छेलाई हास्न कहाँ फुर्सद छ र ? राम्रो फिल्म सिरियल बनाइयो भने उहाँहरु हाँस्न सक्नुहुन्छ ।